Akom-baovao DRMRS Amoron’i Mania: – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Akom-baovao DRMRS Amoron’i Mania:
Fidinanana ifotony tany amin’ny Distrika Ambatofinandrahana ny 31 Aogositra sy 01 Septambra 2021
Ankoatra ny fitsidihana ara-pomba fanajana izay nahafahana nifanakalo hevitra tamin’ny Lehiben’ny Distrika sy ny Ben’ny Tanàna tao amin’ny Distrika Ambatofinandrahana, dia nisy ny :
– Fampahafantarana ny fehezan-dalana mifehy ny harena ankibon’ny tany tamin’ireo manam-pahefana any an-toerana.
– Famantarana ireo toeram-pitrandrahana tsy manara-dalana misy ao amin’ny Kaominina sy Distrika Ambatofinandrahana.
– Fiaraha-nandinika ireo paikady hampidirana amin’ny ara-dalana ireo mpisehatra maro amin’ny harena an-kibon’ny tany misy any antoerana.
– Famantarana ireo olana sosialy misy any ifotony ahafahana iaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha.
Nasiana tsindrim-peo manokana nandritra ny fihaonana tamin’ireo mpisehatra vitsivitsy amin’ny harena ankibon’ny tany ny fampirisihana azy ireo hiditra amin’ny rafitra ara-dalana mba hitondra fampandrosoana ny firenena.
Fampitam-baovao : DRMRS Amoron’i Mania
← Fananganan-tsaina voalohany teo ambany fitarihan’ny Praiminisitra.
Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa →